Reolink Argus 3, yakanyatso kukwana kamera yekutarisa | Gadget nhau
Reolink Argus 3, kamera yakakwana yekutarisa
Miguel Hernandez | 28/05/2021 10:00 | General
Iyo yeAsia yakasimba Reolink Akave achishanda pane izvi kwemakore mazhinji aine akangwara makamera ekuchengetedza imba yako uye chero imwe mhando yeruzivo inouya mupfungwa. Kuburitswa kwake kwazvino kwaigona kusapotsa pane yedu webhusaiti, kwatinogara tichikuchengetedza iwe neruzivo nezve imba yakabatana.
Zivai nesu nesimba rayo rese, zvayakanakira uyezve nezvayakaipira. Usapotsa izvi zvakadzama kuongorora zvakadzama kwazvo.
3 Reolink app uye marongero
Reolink afunga kubheja kuenderera mune ichi chigadzirwa. Kunyangwe, iine zvakakosha zvitsva zvine chekuita neArgus 2 yatinoongororawo pano, chokwadi ndechekuti iyo femu ine dhizaini inozivikanwa mune zvese zvigadzirwa. Ino nguva isu tine mudziyo une rakapetana kumberi chikamu chine nhema nhema, nepo kumashure kwacho kuchinyatso kuumbana mune glossy chena mapurasitiki. kwatinogona kuona iyo logo yekambani. Kune kumashure, nzvimbo ine magineti iyo ichatibatsira kuiisa mukutsigira kwayo kwakasiyana siyana kwatichataura nezvayo gare gare.
Kuyera: 62 X 90 x 115 mm
Iri kumberi kune maLED, mamwe ese ma sensors uye tekinoroji yakatsaurirwa kutora mifananidzo. Kumashure ndiko kwatine microUSB chiteshi chinoshandira magetsi, iyo yekumisikidza base uye inodzidzisa mutauri. Isu zvakare tine "reset" bhatani pazasi pamwe ne on / off bhatani uye chiteshi cheiyo microSD kadhi iyo yatinogona kuwana kuburikidza nesoftware.
Chanza, sezvatakataura, chinotorwa nemagineti adapta iyo ichatibvumidza kuisa kamera pamakona mazhinji pasina zvakanyanya kuyedza.
Iyo Starlight CMOS sensor iri basa rekutora mufananidzo, unokwanisa kupa resolution ye 1080p FHD ine chiyero, ehe, chete 15 FPS. Iyo yakanyorwa vhidhiyo fomati ichave yakasarudzika uye inoenderana, H.264.
Mune ino kesi kamera ine kona yekuona ye120º uye inoshandisa yakanyatso kuoma hurongwa hwekuona husiku mune nhema uye chena kuburikidza nechitanhatu infrared maLED ane kugona kuona kusvika gumi metres, pamwe neruvara rwehusiku kuona system uchishandisa maviri 230 lm maLED ane toni ye6500 K izvo zvinotipawo zvemukati zvinosvika gumi metres kure.
Tine zvitanhatu zvizere zvedigital zoom magnification kuburikidza nechishandiswa chakashandiswa. Kune chikamu chayo, ine maikorofoni uye mutauri izvo zvinotibvumidza isu kuve ne odhiyo mumativi ese maviri uye nekuishandisa se intercom. Kune chikamu chayo, ine inochinjika "PIR" yekufamba kwekutsvaga system ine huwandu hunosvika kumamirioni gumi pakona ye10º.
Iyo ine WiFi yekubatanidza inoshanda mune 2,4 GHz network ine WPA2-PSK chengetedzo. Padanho rehunyanzvi uye rehardware, izvi ndizvo zvese zvatinofanira kutaura nezve iyi kamera, ine zvitsva zvine chekuita neyakambopfuura mishoma, asi inokwana kuramba iri chigadzirwa chinokwezva. Chekupedzisira, ino kamera inoenderana zvizere neimba yakabatana ye Google Mubatsiri.
Reolink app uye marongero
Iyo Reolink application yakanyatso shanda uye inopa yakanaka mushandisi interface uye kuita kwakanaka kune ese ari maviri iOS uye Android, zvirinani mumayedzo atakakwanisa kuita:
Iko kunyorera kuchatibvumidza kuti tibatanidze zvakananga kune kamera mhenyu, zvese kuburikidza neWiFi uye kuburikidza nharembozha. Isu tinogona saka kugadzirisa mamwe masimba pamwe nekutarisa mavhidhiyo akachengetwa pane memori kadhi. Pakati pevamwe, izvi ndizvo zvinonyanya kufadza kugona kwekushandisa:
Nehurombo isu tichafanirwa kuenda kuburikidza neyayo application kune chero mhando yemanejimendi yevhidhiyo kamera zvisinei neizvi, simbisa iyo yakanaka dhizaini uye yakagadziridzwa software iyo yainayo.
Iyi Argus 3 kubva kuReolink inhanho yekumberi nekuita kuti kamera iwedzere kuomarara, ichitipa mukana wekuti usarudze rezuva panhare iyo ichaita kuti chishandiso chigare chichiita basa, zvisinei nemubhadharo webhatiri rayo rinosanganisirwa. Pasina kupokana, imwe inonakidza nzira kune iyo Reolink chigadzirwa renji iri kukura zvishoma nezvishoma, unogona kuiwana paAmazon kubva ku126 euros.
Yakatumirwa pa: May 28 we2021
Kugadziridza kwekupedzisira: May 23 we2021
Hapana server yakabatanidzwa
Kushaikwa kwedzimwe FPS
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Reolink Argus 3, kamera yakakwana yekutarisa
Huawei Bhendi 6, rakanyanya smartband pamusika [Ongororo]
Moto HD 10, hwendefa reAmazon rinovandudzwa rine simba uye rakajeka